विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान दिन गल्कोटको खरुवा माबिमा च्याउ खेती ! – ebaglung.com
विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान दिन गल्कोटको खरुवा माबिमा च्याउ खेती !
२०७५ बैशाख २७, बिहीबार ०४:४६	Top News, थप समाचार
चन्द्रमणी न्यौपाने, गल्कोट २०७५ बैशाख २७ । गल्कोट नगरपालिका ४ खरुवा माद्यामिक बिद्यालयमा च्याउ खेती सुरु गरिएको छ । विद्यालयमा पहिलो पटक गरिएको च्याउ खेती सफल भएको बिद्यालउले जनाएको छ ।
विद्यार्थीलाई ब्यबहारिक शिक्षा अन्तर्गत च्याउ खेती गरिएको हो । च्याउ खेती बिद्यालयका शिक्षक नेत्रलाल सुवेदी र पेसा विषय अध्ययनरत कक्षा ६,७ र ८ का विद्यार्थीले गरेका हुन । गल्कोट नगरपालिकाका प्राबिधिक डि एन दाहाल विद्यालयमा नै आएर तालिम दिएपछी च्याउ खेती सुरु गरिएको थियो ।
पहिलो पटक पाँच वटा परालको मुढामा खेती गरिएको श्रोत शिक्षक नेत्रलाल सुबेदीले जानकारी दिए। च्याउको बीउ नगरपालिकाले सहयोग गरेको शिक्षक सुबेदीले बताए। बिद्यालयले ब्याबसायिक रुपमा च्याउखेती गर्ने योजनामा रहेको प्रधानाध्यापक हेमराज गैरेले बताए ।
बिद्यालयको आर्थिक श्रोतलाई सबल बनाउन समेत ब्याबसायिक च्याउ खेतिले सहयोग गर्ने साथै बिद्यार्थिहरुलाइ ब्याबहरिक सिप सिक्न सहज हुने बिद्यालयले जनाएको छ । बिद्यालयको च्याउ खेती संगै ब्याबसायिक केरा र टिमुर खेती गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
विश्वकर्मा माविमा बिद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न